‘अब एन्फामा फर्किन्नँ, तर फुटबलको विकासमा लागिरहन्छु’ | सबै खेल
गणेश थापाले २ दशकसम्म नेपाली फुटबल हाँके। राष्ट्रिय टिमको पूर्वकप्तानसमेत रहेका गणेश थापा नेपाली फुटबलका पर्याय नै थिए। केही वर्षदेखि फुटबलबाट बाहिर रहेका थापासँग उनको एन्फा कार्यकाल, वर्तमान नेतृत्व, नेपाली फुटबलका उतारचढाव, फिफाको कारबाही र उनका आगामी योजनाको सेरोफेरोमा रहेर सबैखेल डटकमका लागि निर्वान झापालीले गरेको कुराकानीः
तपाईंले २० वर्ष नेपाली फुटबल हाँक्नु भयो, अहिले ६ वर्षदेखि नेपाली फुटबलबाट बाहिर हुनुहुन्छ । त्यो २ दशकमा नेपाली फुटबलका लागि के गरेँ जस्तो लाग्छ ?
म अध्यक्ष भएर आउँदा एन्फा दशरथ रंगशालामा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले दिएको एउटा कोठामा सीमित थियो । एन्फाको चुनाव नभएको पनि लामो समय भएको थियो । खाता रकम पनि शून्यमा थियो । लामो समयदेखि सहिद स्मारक लिग बन्द थियो। लिग गराउन कुनै प्रायोजक नै थिएन ।
त्यो अवस्थामा मैले एन्फाको नेतृत्व लिएको थिएँ। पहिलो बैठकबाटै हामीले राम्रो कामको सुरुआत गर्‍यौं । हामीले राष्ट्रिय टिममा रहेका खेलाडीलाई तलब दिने निर्णय गर्‍यौं । एन्फासँग पैसा नभएकाले पदाधिकारीबाटै उठाएर खेलाडीलाई तबल दिन सुरु गर्‍यौं ।
त्यसपछि फुबटलको मेरुदण्डका रुपमा रहेको लिगलाई चलायनमान बनाउन प्रायोजन खोज्न लाग्यौं। हामीले बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोकाकोलालाई प्रायोजकका रुपमा नेपाली फुटबलसँग जोड्यौं । कोकाकोलाले एन्फासँग एक लाख डलर प्रायोजन गर्ने ऐतिहासिक सम्झौता गर्‍यो। त्यसले नेपाली फुटबल व्यवसायिकता तर्फ लैजान केही हदसम्म मद्दत गर्‍यो । र, लिगलाई निरन्तरता दियौं ।
राष्ट्रिय टिमलाई बलियो बनाउन नयाँ खेलाडी उत्पादनको उद्देश्यसहित हामीले आफ्नै स्रोत र साधनमा एन्फा एकेडेमीको स्थापना गर्‍यौं र एन्फा कम्प्लेक्स बनायौं । त्यसपछि हामीले विद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता सुरु गर्‍यौं। सँगै यू–१४ जिविस सभापति कप र यू–१४ कै नेपाल बैंक जुनियर कपपनि सुरु गर्‍यौं । यी प्रतियोगिता गाउँगाउँमा रहेका नयाँ खेलाडीलाई पहिचान गर्न फलदायी भए।
खेलाडीलाई खेलेरै बाँच्न सक्ने बनाउने उद्देश्यसहित हामीले क्लब र खेलाडीबीच अनिवार्य १२ महिनाको सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्‍यौं। यसले नेपाली फुटबललाई व्यवसायिक रुप दियो। लिग नियमित हुने, प्रायोजक बढ्दै गएपछि हामीले १ लाख रुपयाँ पुरस्कार रहेको ए डिभिजन लिगको पुरस्कार राशि क्रमशः १ करोडसम्म बनायौं । लिगको पुरस्कार राशि मात्रै होइन, क्लबहरुलाई आकर्षित गर्न तयारी खर्च दिने व्यवस्स्था मिलायाैं, त्यसले लिगलाई विस्तारै बलियो बनायो। र, ए डिभिजन लिगलाई महत्वपूर्ण प्रतियोगिताका रुपमा स्थापित गरायो।
काठमाडौं उपत्यकामा मात्र सीमित रहेको क्लब फुटबललाई विकेन्द्रिकत गर्ने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय लिग सुरु गर्‍यौं। राष्ट्रिष्य लिगमा ए डिभिजनका ६ टिम र जिल्लाका चार टिमलाई समेट्दै ‘होम एन्ड अवे’का आधारमा राष्ट्रिय लिगको सफल सुरुवात गर्‍यौं। जिल्लाहरुलाई पनि क्लब जसरी ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ डिभिजनमा वर्गिकरण गरेर नयाँ लिग सुरु भयो। मोफसलबाट जितेर आएका टिम र ए डिभिजनका टिमले होम एन्ड अवे प्रणालीमा डबल लेगमा खेलिने राष्ट्रिय लिग सुरु भएको थियो। आर्थिक हिसाबले क्लबहरुलाई बलियो बनाउन प्रत्येक टिमलाई २५ लाख तयारी खर्च दियौं । विजेतालाई १ करोड, दोस्रोलाई ६० लाख र तेस्रोलाई ३५ लाख दियौं। यहीबीच हामीले विभिन्न नकआउट प्रतियोगिताहरु पनि आयोजना गर्‍यौं । र, जिल्लाहरुलाई संगठित गरे जिल्ला लिग पनि सञ्चालनमा ल्यायौं ।
एन्फा निर्वाचनको सुरुआत पनि हामीले नै गर्‍यौं । जहाँ जिल्ला संघका प्रतनिधिहरु र क्लबका प्रतिनिधिहरुले पनि भोट हाल्न पाउने व्यवस्था बनायौं । खेलाडी संघ, रेफ्रि संघ, महिला संघ गठन गरी एन्फा निर्वाचनमा उनीहरुको पनि सहभागीता सुनिश्चित गर्‍यौं। महिला तथा पुरुष राष्ट्रिय खेलाडी र रेफ्रीलाई तलब दिनका लागि ८ करोड रुपैयाँ फिक्स डिपोजिटमा राख्यौं । साथै खेलाडी विरामी परे भने सहयोग गर्नका ५० लाखको कल्याणकारी कोषणको स्थापना गर्‍यौं ।
बुटबल, धरान तथा च्यासलमा एकेडेमीको स्थापना गर्‍यौं र मिनी स्टेडियम पनि बनायौं । यस्तै, काठमाडौंमा राष्ट्रिय टिम बस्नका लागि एन्फा कम्प्लेक्समा होस्टल पनि बनायौं, सँगै तीन हजार क्षमताको स्टेडियम र आर्टिफिसियल मैदान बनायौं। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिता आयोजना गर्न पनि हामी सफल भयौं।
एसियाली फुटबल महासंघको कार्यसमित सदस्य हुँदै दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघको अध्यक्ष, एएफसी च्यालेन्ज कप तथा प्रेसिडेन्ट कपको अध्यक्ष, एएफसी फेयरप्ले कमिटिको अध्यक्ष हुँदै एएफसीको उपाध्यक्ष भएँ। तीन फिफा विश्वकपमा अनुशासन समितिमा रहेर पनि काम गरेँ । यू–१७ र यू–१९ फिफा विश्वकप आयोजक कमिटीको सदस्यका रुपमा पनि काम गर्ने अवसर पाएँ। यसलाई पनि मैले उपलब्धिकै रुपमा हेरेको छु।
हामीले जेजति काम गर्‍यौं, त्यो पहिलो कार्यकालमै सम्भव भयो । पछि त्यसलाई विस्तार गर्ने काम भयो। त्योबेला हामीले गरेका काम नेपाली फुटबललाई उन्नत बनाउन फलदायी भन्ने लाग्छ ।
त्योबेला एन्फाले महत्वाकांक्षी रुपमा खेलाडीलाई कार, अपार्टमेन्ट पुरस्कार दिन्थ्यो, तर अहिलो रोकिएको छ । अहिले एन्फाले त्यतातिर ध्यान दिएको छैन, तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?
खेलाडी र प्रशिक्षकलाई प्रोत्साहन गर्न वर्षका उत्कृष्ट खेलाडीलाई मोटरसाइलन दिन सुरु गर्‍यौं। पछि मोटरसाइलकबाट कार दियौं । वर्षमै दुईजना खेलाडीलाई पनि कार दियौं । खेलाडीबाट कारको सट्टा अपाटमेन्ट दिनुपर्ने कुरा आयो, हामीले त्यो पनि गर्‍यौं।
खेलाडीलाई प्रोत्सहन गर्न हामीले भारतमा भएको साफ च्याम्पियनसिप प्रतियोगिता र काठमाडौंमा भएको १३औं साफ प्रतियोगितामा प्रथम स्थान हासिल गर्ने खेलाडीलाई अपार्टमेन्ट दिने घोषणा पनि गर्‍यौं । दुर्भाग्यवश, हामीले दुवै प्रतियोगिता हार्‍यौं ।
अहिले त, पुरस्कार घोषणा गर्ने काम मात्र भएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन नै गरिएको छैन । अनि पहिला हामीले गरेको कामको जस लिने काम मात्र एन्फा नेतृत्वले गरेको छ।
पहिला फिफाले एन्फालाई वार्षिक ४–५ लाख डलरमात्र दिन्थो, त्यो बढेर अहिले ४०–५० लाख पुगेको छ । तर, कामचाहिँ पहिलेभन्दा कम भएको छ। एन्फा नेतृत्वले खेलाडीलाई मारेर आफ्नो फाइदा मात्र हेरेका छन्। खेलाडीले पाउने पुरस्कार रकम घटाउँदै लगिएको छ, पदाधिकारीको भत्ता बढाउँदै लगिएको छ। यही हो नेपाली फुलटबको विकास ? यो त नेपाली फुटबलको होइन, एन्फा पदाधिकारीको मात्र विकास हो।
असोज पहिलो साताबाट ए डिभिजन लिग सुरु हुँदैछ। तपाईं नेतृत्वमा हुँदाको ए डिभिजन लिग र अहिलेको लिगमा के परिवर्तन पाउनुहुन्छ?
हामीले मरिसकेको लिगलाई पुनर्जिवन दिएका थियौं । औंलामा गन्न सकिने मात्र दर्शक उपस्थित हुने लिगलाई हामीले हजारौं दर्शक उपस्थित हुने बनायौं । तर, अहिले लिगको स्तर निरन्तर खस्किँदै गइरहेको छ।
रेलिगेसन बिनाको लिग गरियो, त्यो केका लागि ? त्यसले लिगलाई निरन्तरता मात्र दिन्छ, स्तरीय र उपलब्धिमूलक बनाउन सक्दैन । हामीले खेलाडी र क्लबबीच १२ महिना नै पारिश्रमिक पाउने गरी सम्झौता गरेका थियौं । तर, अहिले त्यसलाई घटाएर ४ महिनामा सीमित गरिएको छ । लिगको पुरस्कार राशि एक करोडबाट घटाएर ३५ लाखमा ल्याइएको छ।
खेलाडीले पाउँदै आएको व्यक्तिगत पुरस्कार पनि घटाइएको छ। हिजो हामीले खेलाडीलाई कार र अपार्टमेन्ट पुरस्कार दिएका थियौं, खेलाडीमा छुट्टै जोस ल्याएको थियो, त्यसले । तर, अहिले ती पुरस्कार बन्द भएका छन् । ९ लाख रुपैयाँ पुरस्कार दिएर झारो टार्ने काम गरिएको छ। पाँचतारे होटलमा २० लाखको जाँडरक्सीसहितको पार्टी गर्ने अनि खेलाडीलाई ९ लाख दिएर टार्ने ? के यसले सही अर्थमा फुटबलको विकास गर्छ, तपाईं आफैं भन्नुस्?
अनि यस विषयमा मिडियाहरुले पनि आवाज उठाएका छैनन्, पुरस्कृत भएका खेलाडीहरु पनि बोल्न सकेका छैनन् । एन्फा कार्यसमितिका साथीहरु र खेलाडी संघले नबोलेको देख्दा निकै दुःख लाग्छ। पुरस्कारको घोषणा हुने तर खेलाडीहरुले ६ वर्षसम्म पनि पुरस्कार नपाउनु दुःखद् हो, यसले फुबटललाई अधोगतितर्फ लैजान्छ।
वर्तमान एन्फा नेतृत्वले तपाईंमाथि विभिन्न खालका अनियमितताका आरोप लगाएको छ, के भन्नुहुन्छ ?
मैले सफाइ पाइसकेको छु त । तर अब वर्तमान नेतृत्वको कार्यकालको छानबिन हुनुपर्दछ। उहाँको कार्यकालमा छानबिन भएपछि हाम्रो कार्यकालमा कसरी इमानदारीपूर्वक काम भएको रहेछ भन्ने कुरा आम खेलप्रेमीहरुले थाहा पाउनुहुनेछ। मेरो विचारमा वर्तमान नेतृत्वको कार्यकालमा ठूलो अनियमितता भएको छ, त्यसैले छानबिन हुनुपर्छ।
आरोप लगाउन सजिलो छ, साबित गर्न गाह्रो। अदालत र अख्तियार सबैतिर उजुरी गरे। एउटा व्यक्तिलाई कारबाही गर्न पाँच–पाँचवटा समिति बनाइए। तर, अन्त्यमा कसैले मेरोविरुद्ध केही सबुत भेटेन, म निर्दोष साबित भएँ र मैले सबैतिरबाट सफाइ पाएँ।
खासमा पहिले आरोप लगाउन सजिलो थियो, सबुत चाहिँदैनथ्यो, आरोप लगाए भइगयो। अहिलेजस्तो सिस्टम भएको भए मलाई आरोप लगाउनेहरु आफैं फस्थे। आफूले लगाएका तमाम आरोप गलत साबित भएपछि नैतिकता भएको मान्छेले माफी माग्छ। तर, वर्तमान अध्यक्षले अनेक आरोप लगाउनुभयो अनि गलत साबित भएपछि चुप लाग्नुभयो। अझै पनि कि ति आरोप प्रमाणित गर्न सक्नुपर्‍यो, होइन भने उहाँले सार्वजनिकरुपमा माफी माग्नुपर्‍यो, त्यसको विकल्प छैन ।
तपाईंले अख्तियारबाट सफाइ पाउनु भयो, तर फिफाले त कारबाही गर्‍यो नि ?
फिफाले मलाई गरेको कारबाही र नेपालमा लगाइएको आरोप भिन्नाभिन्नै हुन्। धेरै मानिसलाई भ्रम छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगले सफाइ दियो, तर फिफाले कारबाही गर्‍यो भनेर । फिफाले मलाई कारवाही गरेको व्यक्तिगतरुपमा तत्कालिन एफएफसी अध्यक्ष बिन हमामले पारिवारिक रूपमा गरेको सहयोग भोटको निमित्त दिएको भनेर हो । नेपालमा लगाएको आरोप तत्कालीन एन्फा उपाध्यक्ष र वर्तमान एन्फा अध्यक्षले मेरो कार्यकालमा नेपालमा भएको कामका बारेमा आरोप लगाउनुभएको हो।
फिफाको कारबाहीका विषयमा पनि स्पष्ट पार्न म उचित ठान्छु । खासमा फिफा मलाई जुन कारण देखाउँदै कारबाही गर्‍यो त्यो कारण गलत हो। बिन हमामसँग हाम्रो ‘फेमिलि फ्रेन्ड’ जस्तो सम्बन्ध थियो, र छ । उसले पारिवारलाई सहयोगका रुपमा पैसा दिएको थियो। फिफाले त्यसलाई भोट किन्न पैसा दिएको भन्यो।
खासमा फिफालाई हमामसँग समस्या थियो, उसलाई कारबाही गर्न चाहन्थ्यो। हाम्रो आर्थिक कारोबारलाई हतियारका रुपमा प्रयोग गर्‍यो। त्यसैले हामीबीचको पारिवारिक सहयोग आदानप्रदानलाई राजनीतिकरण गर्दै मलाई कारबाही गर्‍यो। त्यसमा कुनै सत्यता छैन।
यदि बिन हमामले त्यतिबेला भोट किन्नका लागि मलाई पैसा दिएको थियो भने दुवैजना प्रतिबन्धित भइसकेको अहिलेको अवस्थामा पनि किन समयसमयमा आर्थिक सहयोग गर्छ त? अहिले न म भोट गर्न सक्छु, न ऊ चुनावमा उठ्न पाउँछ!
फिफाले गलत कारण दखाएर कारबाही गर्‍यो भन्नुभयो । तर, तपाईंले फिफाको कारबाही त सहजै स्वीकार्नु भयो नि, किन ?
फिफाको निर्णय गलत भएपनि म त्यसलाई फेर्न सक्दिन थिएँ, मसँग निर्णय मान्नुको विकल्प थिएन। त्यसैले म चुप बसेँ । २० वर्ष इमान्दार भएर काम गरेपछि अन्त्यमा त्यसरी कारबाही हुँदा निद्रा नलाग्दो रहेछ। मलाई जति पैसा दिएको थियो मैले त्योभन्दा बढी परोपकारी कममा खर्चिएको छु।
मकवानपुरका भुकम्पपीडितलाई सहयोग गरेँ। मकवानपुरकै एकजना मान्छे छोराको उपचार खर्च छैन भन्दै आए। मैले दश लाख सहयोग गरेँ। कोही सहयोग माग्न आउँदा खाली हात फर्काएको छैन। मलाई लागेको आरोपभन्दा बढी पैसा सहयोग र समाजसेवामा खर्चिसकेको छु। हुन त यो सब गरेर फिफाले गरेको कारबाही फिर्ता हुँदैन। तर, कम्तिमा म सन्तुष्ट हुनसक्छु। आत्मसन्तुष्टीका साथ ढुक्कले निदाउन सक्छु।
गतसाता मात्रै भर्खरै एन्फा अध्यक्षले एक अन्तर्वार्तामा तपाईं माथि फेरि त्यही आरोप लगउनु भयो । आरोप पनि प्रमाणित गर्नसक्छु भन्नुभयो नि?
मैले पनि एन्फा अध्यक्षले ‘मेरो खेल’ भन्ने अनलाइनमा दिनुभएको अन्तर्वार्ता हेरेँ । म त अचम्मित भएँ । होइन कति झुट बोल्न सकेको हो?
उहाँले मेरो बारेमा पनि धारणा राख्नुभएको रहेछ। म पनि उहाँलाई केही प्रश्न गर्न चाहन्छु– सार्वजनिक लेखा समितिले के निर्णय गर्‍यो, निर्णय सार्वजनिक गर्न सक्नुहुन्छ? अख्तियारले तपाईंले लगाउनुभएको आरोप प्रमाणित नभएपछि मुद्दामा तामेलीका राखिएको हो। करिब चार वर्षदेखि तपाईलाई फेरि अख्तियारमा गएर आरोप प्रमाणित गर्नलाई केले रोकेको छ ?
अनि एन्फाका अध्यक्ष नरेन्द्र श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा तपाईंले अख्तियारजस्तो संवैधानिक आयोगले गरेको निर्णयलाई स्वीकार्दै मसँग माफी माग्नुभएको होइन ? अनि अहिले किन दोधारे चरित्र देखाउनुहुन्छ ?
मलाई फिफाले गरेको कारबाही तपाईंले लगाउनुभएको आरोपको आधारमा गरेको हो? मेरो विषयबाहेक तपाईंले उठाएका केही विषयमा पनि तपाईंसँग प्रश्न राख्न चाहन्छु। तपाईले नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक प्राविधिक निर्देशक बनाइयो भन्नुभयो, भीम थापा, कृष्ण थापा र जापानबाट आएका प्राविधिक निर्देशकलाई बिर्सनु भयो ?
सबै निर्णय एक्लै गर्ने अनि अनुमोदन गर्न मात्र आर्थिक नियमावली बनाइएको हो? सबै निर्णयहरु आर्थिक नियावली अनुसार भएको छ? यी सबै विषयहरुमा बसेर बहस गरौं । के तपाई तयार हुनुहुन्छ? त्यसपछि सम्पूर्ण कुराहरु छर्लंग हुन्छ। किन आरोप प्रत्यरोप गर्नु।
अन्तर्वार्ताकै क्रममा उहाँले हवाई टिकटमा भएको अनियमितताका बारेमा छानबिन गर्न महासचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको भन्नुभयो र फिफाले सफाइ दिएको भन्नुभयो, के तपाईं फिफाले दिएको सफाइको पत्र सार्वजनिक गर्न सक्नुहुन्छ ? सफाइ दिएको भए फिफाको अनुमति बिना खर्च गर्न नपाउने गरी किन प्रतिबन्ध लाग्थ्यो ? यसले फिफाले अविश्वास गरेको प्रष्ट भएन र ? अनि छानबिन समितिको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न सक्नुहुन्छ?
हवाई टिकटमा भएको अनियमितताको कुनै पनि निकायले छानबिन गर्दा पनि दोषी व्यक्ति उन्मुक्ति पाउने छैन। हिजोका दिनमा एन्फामा कुनै किसिमको अनियमितता भएको छ भने त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी मैले लिन्छु भनेर अभिव्यक्ति दिएको तपाईलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। आज तपाईलाई एन्फामा भएको अनियमितताको प्रश्न राख्दा जहिले पनि अरूहरूलाई दोष देखाउने ? नेतृत्वले यस्तो गरेको पटक्कै सुहाउँदैन।
तपाईं एन्फामा हुँदा र अहिले नेपाली फुटबलमा कस्तो परिवर्तन आएको छ । के त्योबेला भन्दा अहिले नेपाली टिमले सफलता पाएको हो?
अहिलेको नेपाली टिम राम्रो भएपनि नराम्रो भएपनि यो हाम्रै टिम हो। एकाध बाहेक सबै खेलाडी हिजो हामीले खोजेका, एकेडेमीबाट उत्पादन गरेका नै छन्। टिमका हिसाबमा त यो मेरै कार्यकालको टिम हो। यी खेलाडीले राम्रो खेलेपनि, नराम्रो खेलेपनि जस–अपजस सबै मैले नै पाउँछु। नयाँ व्यवस्थापनले नयाँ टिम ल्याएको भए पो तुलना गर्न मिल्थ्यो। यो हाम्रै टिम हो।
हाम्रो कार्यकालमा तयार गरिएको महिला वा पुरुष राष्ट्रिय टिमले हाल गरेको सफलतालाई आफ्नो सफलता देख्नु वर्तमान नेतृत्वलाई सुहाउँदैन की? वहाँहरूको करिब चार वर्षको कार्यकालमा भन्दा पूर्वअध्यक्ष नरेन्द्र श्रेष्ठको कार्यकालमा नेपाली फुटबलले धेरै सफलता हासिल गरेको थियो होइन र? त्यसलाई किन नजरअन्दाज गर्नुभयो?
म वर्तमान नेतृत्वलाई सोध्न चाहन्छु, हाल महिला तथा पुरुष राष्ट्रिय टिममा रहेका अधिकांश खेलाडीहरू हिजो हाम्रो कार्यकालमा विभिन्न उमेर समूहमा खेलेका र नियमित रूपमा राष्ट्रिय टिममा खेल्दै आएका खेलाडी होइनन् र? तपाई नेतृत्वमा आएपछि तपाईंले सञ्चालन गर्दै आएको एन्फा एकेडेमी र विभिन्न उमेर समूहका खेलबाट आएका कुनै खेलाडीको नाम दिन सक्नुहुन्छ? अनि कसरी भन्नु सक्नुहुन्छ आफ्नो पालामा नेपाली टिमले सफलता पाएको छ भनेर ? भ्रम छरेर केही समयलाई झुक्याउन सकिएला, तर वास्तविक कुरा एक न एक दिन सत्य कुरा सबैलाई थाहा हुनेछ।
हामीले ग्रासरुट फुटबल सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्दा विभिन्न उमेर समूहमा नेपालले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको थियो । तर, अहिले सबैलाई थाहा छ तपाईंले नेतृत्व सम्हालेपछि ग्रासरुट फुटबल सही तरिकाले सञ्चालन नगर्दा उमेर समूहमा नेपालको प्रदर्शन निकै निराशाजनक छ होइन र ? यस विषयमा मैले वा तपाईंले भन्नुभन्दा नेपालको उमेर समूहको खेलको नतिजाले प्रष्ट पार्छ होइन र?
कारण जस्तो भएपनि फिफाले तपाईंमाथि प्रतिबन्ध लगायो । समाजिक सञ्जालमा तपाईंको सक्रियता हेर्दा फेरि एन्फामा फर्कने योजनामा हुनुहुन्छ जस्तो देखिन्छ । के छ त योजना ?
ढुक्क हुनुहोस्, म एन्फामा कहिल्यै फर्किन्नँ। सानैदेखि खेलेको र सिंगो जीवन नै फुटबलमा अर्पण गरेकाले फुटबलबाट चाहिँ म टाढा बस्दिनँ। कुनै न कुनै माध्यमबाट फुटबलसँग नजिक नै रहन्छु। तर, एन्फामा चाहिँ फर्किन्नँ।
त्यसो भन्दैमा म चुपचाप बस्छु भन्ने होइन। प्रतिबन्ध खुलेसँगै मेरो खबरदारी झन् बेजोड हुनेछ। म एन्फाको प्रतिपक्षका रुपमा रहेर त्यहाँ हुने हरेक कमिकमजोरीमा प्रश्न उठाउनेछु। एन्फा कमिटीमा त्यतिबेला जोसुकै होस्, एक डिग्री मात्र बाङ्गिएछ भनेपनि त्यसलाई म सिधा बनाउँछु।
फिफाले ममाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा नेपाली फुटबललाई ठूलो नोक्सान भएको जस्तो लाग्छ। व्यक्तिगतरुपमा मैले पीडा लिने एउटा ठाउँमा छ, आज जुन किसिमबाट एन्फा नेतृत्वले विदेशबाट आएको सहयोग जुनरुपले दुरुपयोग भइरहेको छ, त्यो देख्दा निकै दुःख लाग्छ । हिजो हाम्रो कार्यकालमा कालो चिया खाएर संस्थाको निमित्त काम गरेका थियौं।
निकट भविष्यमा नै मकवानपुरमा फुटबल एकेडेमीको स्थापना गर्ने तयारीमा छु । काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यसबाट मकवानपुरमा रहेका अति दुर्गम ठाउँबाट पनि प्रतिभाको खोजी गरी अवसर प्रदान गर्नेछाैं । यसलाई अन्य जिल्लामा पनि विस्तार गर्ने योजना छ।
यी बाहेक नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिममा योगदान गरेका खेलाडीहरुलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रमको पनि योजना छ। मेरो रगत-रगतमा फुटबल छ, त्यसैले कुनै न कुनै रूपमा फुटबलमा सक्रिय नै रहनेछु।
अन्त्यमा, नेपाली फुटबल फ्यानहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ?
धेरै फुटबल फ्यानसँग मेरो विभिन्न माध्यमबाट अन्तर्क्रिया हुन्छ। सुरुमा मिडियामा आएका निराधार समाचारहरुले उहाँहरुलाई नकारात्मक बनाएको थियो। सुरुबाटै उहाँहरुको माइन्डसेट नै अर्कै बन्यो। तर, समयसँगै उहाँहरुले बुझ्दै जानुभएको छ।
पहिले नकारात्मक टिप्पणी गर्ने धेरै हुनुहुन्थ्यो। अहिले सकारात्मक कुरा गर्ने धेरै हुनुहुन्छ। केही एजेन्डा लिएर बस्नुभएका र केही गणेश थापालाई गाली गर्ने मिसन लिएर बस्नु भएका सीमित व्यक्ति बाहेक सबैजना मसँग सकारात्मक हुनुहुन्छ।
उहाँहरुलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। नेपाली फुटबललाई सधैं माया गर्नुहोस्।
Tags: ANFA, ganesh Thapa
दक्षिण अफ्रिकाले जित्यो आयरल्यान्डविरुद्धको टि–२० सिरिज